Vanhu Vanoungana muBulawayo Vachioneka Mutumbi waVaCharumbira
Vatsigiri veZanu PF pamwe nehama neshamwari dzenhengo yeboka rechidiki reZanu PF vaungana muBulawayo neChishanu vachionekana nemutumbi waVaMagura Magura Charumbira avo vakashaya nemusi weMuvhuro.
Vanhu vaungana pane imwe imba inochengeterwa mitumbi yevanhu vakafa muguta reBulawayo ndokuzobvapo vachiteverera motokari yange yakatakura mutumbi waVaCharumbira vachifora pamwe nekuimba vakananga kumahofisi eZanu PF ari kumahombe-kombe kweguta.
Vamwe vataura neStudio 7 vati kushaya kwaVaCharumbira kunoreva kurasikirwa kukuru kwebato reZanu PF pamwe nenyika.
Mumwe mutsigiri webato reZanu PF avo vazviti vanonzi Maina Amana vati vakashanda naVaCharumbira kwenguva yakareba uye vaivaziva semunhu akashinga aive akazvipira kufira chokwadi.
Mumwewo wechidiki muZanu PF, Hope Sendamayi, ati kunyange hazvo VaCharumbira vachionekwa nevakawanda semunhu aikonzeresa mutauro, ivo vanoona bato ravo rarasikirwa zvikuru vachitiwo mufi aimira pachokwadi nguva dzose.
VaCharumbira, avo vaive sachigaro wevechidiki murimwe dunhu remuBulawayo vakaita mbiri yekuve munhu akatungamira vamwe vechidiki kusvooredza mudzimai wevaimbove mutungamiri wenyika, Amai Grace Mugabe.
VaCharumbira vakashaya nemusi weMuvhuro mutsaona yemotokari pedyo nedhorobha reNorton vari murwendo rwekuenda kuHarare. Zanu PF yakavapa ruremekedzo rwegamba rehondo yerusununguko.
Vamwe vanhu vakashora ruremekedzo urwu vachiti VaCharumbira, avo vange vave nemakore makumi matatu nemana, vaisakodzera ruremekedzo urwu.
Asi vebato reZanu PF vanoti VaMagura vanokodzera kupiwa ruremekedzo urwu.
Mutumbi waVaCharumbira uchatakurwa kubva muBulawayo neMugovera kuenda kumusha kwavo kuBikita uko vachanovigwa nemusi weSvondo.